အာရေဘီယန် ကွမ်းပို ့စ် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » အာရေဘီယန် ကွမ်းပို ့စ်
အာရေဘီယန် ကွမ်းပို ့စ်
Posted by ေမာင္ ေပ on Jul 9, 2011 in Creative Writing, Short Story | 1 comment
ဒီတစ်ပါတ်တော့ မောင်ပေ တစ်ယောက် စိတ်တော်တော် ထွေပြားနေမိတယ် ။ မောင်ပေ တစ်ယောက် ဆရာသုမောင် ကို အားကျ ပြီး ဂေဇက်ထဲ မှာ ကွမ်းပို ့စ် လို ့ခေါင်းစဉ်တပ် ပြီး စာရေးတယ် ။ ကွမ်း လို ့နာမည် ထဲ မှာ ထည့်ရေးထားသလို ပဲ ကျွန်တော့်ပို့ စ် ဟာ လည်း ဖတ်တဲ့သူ တွေ အရည်ရ အဖတ်ရ ချင် မှ ရမယ် ။ ဒါပေမယ့် ကိုယ် သိထားတဲ့ ဟာလေး တွေ ကို ပြန်ဖောက်သည် ချ တယ်လို့သဘောထားပါတယ် ။ ဂေဇက်မှာ ပို ့စ် စတင် ကတဲ က ပြန်ပြီး edit မလုပ်ခဲ့ဖူးပါ ။ ကိုယ် ပထမ ဆုံး တိုက်ပင်း ပြီး ရင် တစ်ချက် ပြန်စစ် ပြီး categories ရွေး ပြီး publish လုပ် လိုက်တာပါပဲ ။ ဘယ်လို သဘောထား သလဲ ဆိုရင် မီးပုံပျံ တစ်လုံး လွှတ်လိုက်သလို ပါပဲ ။ မီးပုံပျံ လွှတ်တော့မယ် ဆိုရင် မှိုင်းဝ အောင် အောက်ကနေ ပေးပြီးမှ လေထု ထဲ ကို လွှတ်တင်လိုက်သလို ပါပဲ ။ ပို ့စ်တစ်ခု တင်ပြီ ဆိုရင် လဲ ကိုယ်ရေးတဲ့ အကြောင်းအရာ နဲ ့ပတ်သက်ပြီး တတ်နိုင်သမျှ စုံစုံလင်လင်လေး ဖြစ်အောင်ရေး ပြီး ရင်တမမ နဲ ့တင်လိုက်ရတာပါပဲ ။ ကိုယ်လွှတ်လိုက်တဲ့ မီးပုံပျံ ဟာ အပေါ ်ရောက်သွားရင် ပြန်ပြင်လို ့မရတော့ သလို ။ ရွာထဲ ကို တင်လိုက်တဲ့ ပို ့စ် ကို လည်း ပြန်မပြင်ခဲ့ပါဘူး ။ ထားပါဗျာ ။ မနေ ့က အသိ ဦးလေး တစ်ယောက် နဲ့ထမင်းစား ရင်း ၊ သူ ပြောပြတဲ့ အာရေဘီယန် စကား လေးခွန်း ကို တော်တော် သဘောကျမိတယ် ။ အင်းဂလိ လို ပါ ။ သူ က ကျွန်တော့် ကို ဘာသာပြန်ကြည့် ပါတဲ့ ။ မောင်ပေ လည်း တတ်သလောက် မူးစုပဲစု လေး နဲ ့ဘာသာပြန်ကြည့်တော့ တစ်လွဲ ။ ဒါနဲ ့အဖြေပေးပါတော့ ဆိုတော့ မှ သိရတာ က အခု လက်ရှိ ဖြစ်နေကြတဲ့ ရပ်တည်နေကြတဲ့ လူတွေ ရဲ ့စရိုက်ကလေး ကို တိုတို နဲ ့ဖော်ပြထားတယ် လို ့ခံစားမိသွားတယ် ဗျာ ။ ဒါနဲ ့ရွာသူ ရွာသား များကို လည်း ကျွန်တော် သိသလို မျိုးလေး ပြန်သိစေချင်လို ့ကွမ်းပို ့စ် လို ့ခေါင်းစဉ်တပ်ပြီး တင်လိုက်ပါတယ် ။ သိရှိပြီးသား သူ များအနေနဲ ့လည်း တစ်ခါပြန်ဖတ်တယ်လို ့သဘောထားပေးပါ ဗျာ ။ ဒီလိုဗျ……
He who knows not and knows not he knows not . ( he is fool,shun him )
He who knows not and knows he knows not . ( he is simple,help him )
He who knows and knows not he knows . ( he is sleeping,wake him)
He who knows and knows he knows. ( he is wise man,follow him )
တဲ့ ။ ဘာသာပြန်ရမှာ ပျင်းတဲ့ ရွာသူရွာသား များအတွက် တစ်ခါတည်း ဘာသာပြန်ပေးလိုက်ပါတယ် ။
၁။ ။ သူ ဟာ ဘာမှ မသိမတတ် နားမလည် ဘူး ။ ဒါပေမယ့် သူ ဟာ ဘာမှ မသိမတတ် နားမလည် ဘူး ဆိုတာကို လည်း သူ ့ကိုယ်သူ မသိဘူး ။ သူ ဟာ အရူး ပဲ ၊ ရှောင်ရမယ် ။
၂။ ။ သူ ကတော့ ဘာမှ မသိဘူး မတတ်နားမလည်ဘူး ။ ဒါပေမယ့် သူ ့ကိုယ်သူ မသိကြောင်း မတတ်ကြောင်း နားမလည်ကြောင်း ကို တော့ သူ ့ဘာသာ သူ သိတယ် ။ သူ ဟာ လူရိုးပါ ၊ သူ ့ကို ကူညီပါ ။
၃။ ။ သူ က တော့ သိတယ် တတ်တယ် နားလည်တယ် ။ ဒါပေမယ့် သူ သိတယ် တတ်တယ် နားလည်တယ် ဆိုတာ သူ ့ကိုသူ မသိဘူး ။ သူ ဟာ အိပ်နေတဲ့ သူ ပဲ ၊ သူ ့ကို နှိုးလိုက်ပါ တဲ့ ။ ( ဥပမာ ဆိုရင် ဆရာဝန် ဖြစ်ပေမယ့် ဆရာဝန် လုပ်မစား တဲ့ သူတွေ နဲ ့များ တူနေမလား မသိဘူး ။ ဒါက ကျွန်တော့် အထင်သက်သက် ပါနော် )
၄။ ။ သူ က တော့ သိတယ် တတ်တယ် နားလည်တယ် ။ သူ ့ကို သူ သိမှန်း တတ်မှန်း နားလည်မှန်း လည်း သူ ့ကိုယ်သူ သိတယ် ။ ဒီလူ ကတော့ ပညာရှိပဲ ။ သူ ့နားမှ နေ သူ နဲ ့အတူ အလုပ်လုပ် ပါ တဲ့ ။
စကားလေး က တော့ ဒါပဲ ဗျာ ။ ရွာသူ ရွာသားများလည်း ကိုယ့်ကိုကိုယ် ဘယ်ထဲ မှာ ပါ သလဲ ဆိုတာ အပေါ ်က စာလေးတွေ နဲ ့ကိုက်ရင် ကိုက်ကြည့် ကြပေါ့ဗျာ ။ တစ်ခုခုတော့ အဖြေထွက်မှာပါ ။ အဲ သဘောကျ လို ့တစ်ဆင့်ပြန် ကော်ပီလုပ် ပေ့စ်လုပ်ပြီး ပြန်ဖြန် ့ခဲ့မယ် ဆိုရင် windtalker ဆိုတာလေး ကို ပါ ထည့် ပေးခဲ့မယ်ဆိုရင် အတိုင်းအထက် အလွန် ပေါ့နော် ။ အားလုံး ကို ကျေးဇူးတင် ပါတယ် ။
ကိုယ်ဘာလုပ်လို့ လုပ်ရမယ်ဆိုတာ သိတဲ့ လူဖြစ်တာ အကောင်းဆုံးပေါ့ကွယ်..
ကွမ်း ဆိုတာ ယောကျားတွေ အစားများတယ်။ ကွမ်းပိုစ်လို့ နာမည်ပေးလိုက်ရင်တော့ အမျိုးသားထု တခုလုံး နီးပါးကို ဆိုလို သလိုတောင် ဖြစ်နေရော့လားကွယ်။ အဲဒီထဲမှာ ရှေးဆန်တဲ့ အဘွားကြီးတွေလည်း ပါချင်ပါမှာပေါ့..
ကွမ်း ပိုစ် အကြောင်းနားလည် သွားတော့ ဒီပိုစ်တွေက ကိုယ်နဲ့ မဆိုင်ဘူးလားလို့ တွေးမိလာတယ်။